RecalBox: Madal Ciyaaraha Kubada Cagta ee Ciyaaraha | Qalabka bilaashka ah
Haddii aad raadineysid nidaam dhameystiran oo aad ku sameysatid xarun kuu gaar ah oo warbaahin ah iyo madadaalo, markaa RecalBox waa mashruuca kama dambaysta ah ee aad u baahan tahay. Nidaam aad ku rakibi karto saxankaaga Raspberry Pi iyo in aad haysato qalab jaban oo aad saacado badan oo madadaalo ah ugu qaadato qolkaaga ama qolka madadaalada gaarka loo leeyahay.
Haddii aad aqriso Hwlibre, waa inaad horeyba u ogaatay taas waxaa jira fursado badan loogu talagalay ciyaaraha retro, laga bilaabo qaybo ka mid ah si loo soo ururiyo mashiinkaaga arcade macmal ah, xitaa kuwa kale oo badan beddelka RecalBox lafteeda guddigaaga SBC. Wax walba waa inay ka soo kabtaan kuwa cajaladaha fiidiyowga ee caadiga ah ee mashiinnada dib-u-celinta ee ka socda Nintendo, Atari, iyo waxyaabo kaloo badan. Jawhar sax ah oo aan joojinayn soo jiidashada cayaartoyda ...
1 Waa maxay RecalBox?
1.2 U hoggaansanaanta
2 Ku rakib RecalBox Raspberry Pi
2.1 Waxyaabaha loo baahan yahay
2.2 Ku rakib RecalBox miiskaaga Raspberry Pi
2.3 U habeeyso RecalBox
Waa maxay RecalBox?
RecalBox waa nidaam bilaash ah oo furan oo kuu oggolaanaya inaad ku dayato tiro aad u tiro badan oo kombuyuutarro ah iyo kombiyuutarro. Barmaamujyadani waxay leeyihiin ciyaaro badan oo fiidiyow ah oo mala awaal ah oo aad hadda ku noolaan karto mahadsanidiin barnaamijkan. Intaas waxaa sii dheer, RecalBox waa lagu kala duwanaan karaa nidaamyada kale ee beddelka ah maxaa yeelay waxay sidoo kale u oggolaaneysaa shaqada multimedia.
Thanks to the xirmooyin dheeri ah oo loogu talagalay multimedia waxaad awood u yeelan doontaa inaad abuurto dhexdhexaadiyahaaga weyn oo ay weheliso xarun dib-u-habeyn ah. Dhamaan hal, dhexe iyo si fudud. Looma baahna in la isticmaalo nidaamyo badan oo lagu kiciyo mid ama kan kale sida NOOBS.
Dhamaystirka ka sokow, sidoo kale waa si joogto ah u cusbooneysii iyada oo ay ugu mahadcelinayaan bulshadeeda firfircoon ee soosaarayaasha. Sidaa darteed, waxaad xal u heli doontaa cayayaanka, iyo hagaajinta joogtada ah ee sida xaqiiqada ah loo qadariyo.
Waxaas oo dhan, RecalBox ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah meelaha ugu fiican madadaalo…
Si aad u soo dejiso - RecalBox
Mid ka mid ah talaabooyinka waaweyn ee horay loogu qaaday mashruucan waxay ahayd imaatinka nooca 'RecalBox 6.0'. Tani waxay la ahayd isbedel weyn oo xagga horumarka ah ee 'RecalBox', taasina waxay saldhig u noqotay sii deynta dhowaan sida nooca xasilloon ee RecalBox 6.1.1 oo ah kii ugu dambeeyay waqtiga qoritaanka maqaalkan.
RecalBox OS asal ahaan waa a Qaybinta GNU / Linux loogu talagalay multimedia iyo dib-u-habeynta sida aan horayba u soo sheegay. Waxaa loo qorsheeyay in loo isticmaalo Raspberry Pi markii hore, sidoo kale waxaa la gaarsiiyay nidaamyada Odroid iyo x86 ee nooca 4.1, iyo xitaa weelasha.
Mashruuca asalka Faransiiska wuxuu gaaray mid ka mid ah ugu badnaantiisa noocaan ah 6.x, halkaas oo ay awalba awood u laheyd inay ku daydo boqol qalab iyo nidaamyo iyada oo loo marayo piFBA iyo RetroArch, iyo sidoo kale EmulationStation2.
Waxaa ku jira Kodi awood badan loogu talagalay multimedia, oo leh dhammaan faa'iidooyinka ay tani tilmaamayso. Waxay sidoo kale laheyd muuqaalkeeda garaafka ah ee sahlanaanta iyo xakamaynta raaxada leh, iyo shaqadeeda wanaagsan waxay ka dhigtay Raspberry Pi Foundation inay tixgeliso ka mid noqoshada NOOBS oo ay leeyihiin horumariyayaal kale oo ay u adeegsadaan aasaaska fargeeto la yiraahdo Batocera.linux (2016).
Hadaad isweydiiso waafaqsanaanta ciyaaraha fiidiyowga, taasi waa, maxaa barnaamijyo ah oo ay ku dayan karto si ay u maamusho dhammaan ciyaaraha fiidiyowga ee isku habboon, markaa waa inaad ogaataa liiska buuxa ee RecalBox lagu qalabeeyay:
Color Boy Boy Color
Midabka NeoGeo Pocket
Iyo nidaamyo badan ...
Ku rakib RecalBox Raspberry Pi
Si aad ugu raaxeysato RecalBox-kaaga adigoon u isticmaalin kombuyuutarkaaga, waxaad ku sameyn kartaa qiimo jaban guddiga SBC sida Raspberry Pi. Sidaa darteed, dhowr tobanaan euro waad awoodi kartaa leeyihiin nidaamka oo dhameystiran si aad ugu dhejisid madadaaladaada iyo xarunta warbaahinta kala duwan, adigoo ku xiraya saxankan TV-ga qolkaaga ...
Waa maxay waxaad u baahan tahay inaad iibsato inaad dejiso arcade (haddii aadan horey u haysan) waa kuwan soo socda:
Raspberry Pi 3 (Nasiib darro, noocyada hadda jira kuma darin taageerada Pi 4)
Kaarka xusuusta microSD ugu yaraan 16GB
Adapters ada iyada oo loo marayo USB-ga loogu talagalay 2.5A iyo 5v power.
Cable HDMI si loogu xiro TV-ga ama shaashadda.
Maamulaha ciyaaraha fiidiyowga ee isku habboon ama qaar retro jirta.
Kiiska Raspberry Pi ama guriyeynta (Ikhtiyaar)
Dhanka, waxay sidoo kale iibiyaan xirmada oo dhameystiran sida bariga Aukru inaad haysato sanduuq, kuleyliyaha iyo adabtarada awoodda ee Pi ...
Ku rakib RecalBox miiskaaga Raspberry Pi
Markaad haysato dhammaan waxyaabaha, tallaabada xigta waa rakibi RecalBox on your guddiga Raspberry Pi adoo raacaya talaabooyinkan fudud:
Soodejiso RecalBox ka website-ka rasmiga ah. Hubso inaad doorato sawirka ku habboon tusaalahaaga saxanka. Haddii .img lagu cadaadiyo .zip waa inaad furtid.
Hadda waa inaad isticmaashaa Etcher si aad u iftiimiso microSD oo ku rakib dusha RecalBox. Waxaad raaci kartaa kuwan tallaabooyinka aan kugu tusay maqaal kale.
Hadda, geli kaarka microSD booska Raspberry Pi-gaaga, haddii aad isku xirto dhammaan fiilooyinka, waad shidi kartaa si aad u bilowdo booto ...
Sida ugu fudud ee taas!
U habeeyso RecalBox
Isku habeynta kabaha kadib ma qaadaneyso waqti dheer. Way iska fudud tahay nidaamka nidaamka. Sidoo kale, haddii aad leedahay xakamaysade USB ah, waad ku xidhi kartaa oo si toos ah ayey u shaqeyn doontaa haddii la taageero. Haddii ay dhacdo inaad noqoto wireless, waa inaad u isticmaashaa aaladda loo yaqaan 'bluetooth dongle' xiriirkeeda oo aad sugto inta ay ka garaneyso mystery Sir badan ma leh.
Haddii aad rabto sii wad hagaajinta faahfaahinta kale laga bilaabo Kodi, ama nidaamka RecalBox laftiisa, waxaad xor u tahay inaad la qabsato si kasta oo aad u rabto baahiyahaaga ...
Hadaad rabto inaad ogaato sida dhig ROM-yada ciyaaraha fiidiyowgaaga, Horaan wax u sharaxay maqaalkan kale. Kaliya waxaan rajeynayaa inaad madadaalo leedahay!
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » RecalBox: barnaamijka ugu dambeeya ee ciyaaraha gadaal
ADS1115: beddel analog-dijitaal ah oo loogu talagalay Arduino